Global Voices teny Malagasy » Oganda: Nandrava ny tsenan’i Owino ny afo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2019 7:46 GMT 1	 · Mpanoratra Rebekah Heacock Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Voina
(Marihana fa efa tamin'ny taona 2009 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Owino, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Tsena Nakivubo Park Yard sy St. Balikuddembe no tsenabe lehibe indrindra ao Kampala ary ao anatin'ny adihevitra maro momba ny zo fampanofana. Nisy ny drafitra vao haingana hanamboatra toby fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka vaovao ao amin'ny kianjan'i Nakivubo eo akaiky, izay niteraka hatezerana teo amin'ireo mpivarotra, izay ho very toerana raha mivoatra ny fanatanterahana izany.
Mitatitra  ny Daily Monitor any Oganda fa nanomboka tao amin'ny lavaka amin'ny rindrina iray manasaraka ny tsena amin'ny kianja ny afo, ary maro ireo niharam-boina miampanga ny orinasan'ny fitateram-bahoaka fa te-hanangana ny gara amin'ny afo. Miombon-kevitra ireo bilaogera sasany.
Phantom ao amin'ny Even Steven  manoratra hoe:
Nirehitra ny tsena. Mijanona amin'ny afo aho satria ireo izay tokony hahalala, na dia nilaza izany aza tao anaty alahelo aza, dia mitazona ny heviny fa misy olona mandoro ny fiainan'izy ireo. Raha nihaino an'i PK Bbosa ny hariva rehefa nampivahiny mpivarotra sasany izy, dia hita fa ny minisitra Matiya Kasaija sy ny namany, minisi-panjakana misahana ny fisorohana ny loza voajanahary, Musa Echeru no niseho tamin'ny zavatra tokony ho heverina avy hatrany fa porofo lehibe: kavera  (Ed.: harona plastika) sy tavoahangy kely izay mazava ho azy fa efa nahitana solika. Mampiahiahy fa tsy nojeren'ny polisy ireo entana ireo.
Geria ao amin'ny Ariaka  manontany tena raha manana anjara toerana ny departemantan'ny afo:.
Ny mpitarika ao amin'ny foiben'ny ady amin'ny afo, toa vato nariana avy amin'ny sehatra Nakivubo ny borigadin'ny polisy mpamonjy trano may. Tonga tany amin'ilay toerana ry zareo 90 minitra taoriana araka ny tatitra an-gazety.
Tumwijuke ao amin'ny Ugandan Insomniac mitaraina noho ny fahaverezan'ireo fivelomana maro be, hoy izy: “Hirika ho amin'ny fanovana ny loza rehetra, saingy Oganda ity. Amin'ny endrika-L ny fianaranay. Miampanga ireo mpanao politika maro izay nandany ny Alarobia tamin'ny kajikajy ara-politika teny an-tsena izy:
Tokony hisy Androm-pirenena iray ho an'ny fihomehezana ireo mpanao politika rehetra. Nandany ny omaly hariva teo amin'ny tsenan'i Owino aho. Tao anatin'ny telo ora teo ho eo, dia mpanao politika 17 teo an-toerana sy nasionaly no voaisako tonga nitsidika ny tsena mba hampiseho ny fiaraha-miorin'izy ireo amin'ireo mpivarotra. Nanome tsiny ny governemanta ho tsy mampiasa vola amin'ny fiarovana ny vahoaka ny mpitarika ny mpanohitra. Nanao fampanantenana fanonerana tsy mety tanteraka ny filankevitry ny minisitra. Nilaza ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta fa ampy izay ary fotoana izao ho an'ny vahoaka hitakiana bebe kokoa ny hetran'izy ireo. Tsy nisy na iray tamin'izy ireo aza nilaza fa mazava ho azy fa: nipetraka tamin'ny baomba ireo mpivarotra ireo, ary fantatry ny mpanao politika rehetra izany ary nisafidy ny tsy hanao na inona na inona izy ireo.
Nitsikera ireo mpanao politika Ogandey izay “manana fahasahiana hilaza fampanantenana poakaty no sady manaratsy ny governemanta” i Spartakuss  Hoy izy nanoratra:
Niantsena tany aho, tany aho no lehibe [tsia, tsy nijanona aho, efa ela fotsiny aho no tsy nividy fitafiana] ary nolazain'ny namana iray tamiko izay nivarotra akanjo tamiko fa ny akanjo nofonosony izay tena tsara dia amidy eny amin'ny tsena avo lenta ka tafakatra amin'ny vidiny UGX 1 tapitrisa (Ed .: manodidina ny 500 dolara)! Ankehitriny, dia tratra tsy misy fivoahana ity vahoaka ity, nitrosa izy ireo, nindram-bola, nandevina ny tahiriny nandritra ny fiainany. Niova noho ny tranga iray ny fiainan'olona 25000. Ahoana ny amin'ny olona velomin'izy ireo, ny fianakavian'izy ireo, ny zanak'izy ireo any amin'ny tobim-pianarana? Mitovy amin'ny fampihorohoroana izany!
Farany, ireo olona miasa sy misasatra mafy ary mitsemboka sy mihinana ny fako mandalo ao amin'ny toeram-piasan'izy ireo no mizaka ny zava-drehetra izay ankafizina sy irian'ireo mpanao politika. Izy ireo no mifidy, maka trosa, mandefa ny zanany any an-tsekoly, izay mividy ireny siramamy sy dite vokarin'ny mpampiasa vola ireny! Izy ireo no antony mahatonga ny fisian'ny ankamaroan'ireo banky ireo! Izy ireo no antom-pisian'ny haba hetra ao Kampala! Manohana ity tanàna ity izy ireo ary saika ity firenena ity no eo an-tsorok'izy ireo! tsy amin'ny na inona na inona fa amin'ny soroka malefaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/31/144386/
 Ugandan Insomniac : http://ugandaninsomniac.wordpress.com/2009/02/26/things-we-won%E2%80%99t-learn-from-the-owino-market-fire/